Misoro yeNhau dzaNhasi, Chipiri, Kubvumbi 27, 2021
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, VaFrederick Shava, nevakuru vakuru vemauto vari kuMozambique kumusangano wemakurukota enyika dzemudunhu reSADC wekuronga nzira dzekubatsira Mozambique iyo iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti kusamira zvakanaka kwemitemo yevashandi kwave kupa kuti vashandi vakaita sevave kudzingwa mabasa kuCBZ vamanikidzwe kuenda pamudyandigere vasina chavainacho bhanga iri richiti riri kumisa vashandi varo basa nekuda kwechirwere cheCovid-19 uye rave kushandisa michina yakawanda.
Bazi rezvehutano rakazivisa nezuro kuti vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19, uye vanhu gumi nevatanhatu,16, vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 nezuro wakare.
Zanu PF yotambira vose vakambenge vadzingwa mubato iri vachinzi vaive nhengo dzeG40. Asi vose vari kuramba vachituka nekunyomba hurumende pamwe nemutungamiri wenyika havasi kuzombvumidzwa kudzoka muZanu PF.